⁭မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခညောင်း သော ကိုတုတ်ကြီး: May 2009
ကျွန်ုပ် တုတ်ကြီးသည် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်မဟုတ်။ ပညာဟုတ်တိပတ်တိ တတ်လှသည်မဟုတ်။ လုပ်ချင်ရာလုပ် သလို နေချင်ရာနေတတ်သည့် လူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကနဦးအသိပေးလို၏။ သို့ သော် တုတ်ကြီးသည် အမိမြန်မာ အဖမြန်မာမှ မွေးဖွားသော
မြန်မာပြည်သူ တယောက် ဖြစ်၏။ ထို့ ကြောင့် ပြည်သူ တယောက်အနေဖြင့် ပြည်သူတယောက်၏ အမြင်အား တင်ပြ ခြင်းသာဖြစ်၏။ ရှင်းရှင်း ကလေးပင်။
ထိုအချက်အလက်များအား လက်ခံမှသာလျှင် သင့်အနေဖြင့် ဆက်လက်ဖတ်ရှုသင့်ကြောင်း အသိပေးမေတ္တာရပ်ခံပါ၏။
ဂရုစိုက်သည်မစိုက်သည် က ကိုယ်တော်တို့ ၏ ကိစ္စဖြစ်ပေသည်ဆိုသည်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ကောင်းကောင်း အသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်ပါကြောင်း.....
တောင်းကြ၏။ မေတ္တာရပ်ခံကြ၏။ ဟုတ်ပြီ။
လက်မှတ်များစွာလဲ ထိုးလိုက်ကြ၏။ တင်လိုက်ကြ၏။
နအဖ စစ်အာဏာရှင် အား တကမ္ဘာလုံး က ရှုံ့ ချကြ၏။ ဒါက သိပ်ထူးဆန်းလှသည့်ကိစ္စမဟုတ်တော့။ ကုလသမဂ္ဂ၏ လုံခြုံရေးကောင်စီ မှ လည်း စာထုတ် အပြစ်တင်၏။ နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာပြည်ဖွားတို့ လည်း တတ်နိုင်သည့်နည်းပေါင်းစုံဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမလိုလားကြောင်း
စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တရပ် ကိုလိုလားကြောင်း နအဖ သံရုံးများ ကုလသမဂ္ဂ ရုံးများရှေ့ မှောက် ဆန္ဒပြ ကြွေးကြော် ကြ၏။
တိုင်းပြည်တွင်းမှ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးမှာလည်း ခံပြင်း ဒေါသထွက်ကြ၏။
တပ်မတော်အတွင်းမှ ပြည်သူလူထု ကိုစာနာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစား မြတ်နိုးသော တပ်မှူး တပ်သားရဲဘော်အပေါင်းတို့ လည်း မီးစင်ကြည့်က နေရင်း ရင်တမမ ဖြင့် အခွင့်အခါကောင်းကိုစောင့်မျှော်နေကြ၏။
ဤနေရာတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ အစည်း ၊ တရုတ် ၊အိန္ဒိယ ၊ရုရှား ၊ဂျပန် နှင့်အတူ အီးယူ အဖွဲ့ အစည်း အမေရိကန် ၊ကုလသမဂ္ဂ တို့ ၏ အသံကို ဆန်းစစ်လေ့လာကြည့်ရမည်ဆိုလျှင်။
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများအား ချဉ်းကပ်ခြင်းအကျဉ်း
တရုတ်ကတော့ ခပ်ပြောင်ပြောင်ပင် ။ သူ့ ပြည်တွင်းရေးဖြစ်သည် မိမိတို့ဝင်မရှုပ်ဟူသော စကားတစ်လုံးဖြင့် လူကြီးလူကောင်းလိုလို လေသံပစ်ကာ ခေါင်းရှောင်၏။ တကယ်တော့ ထိုကဲ့သို့ ခေါင်းရှောင် စကားကိုပြောခဲ့သည့်
တရုတ် အစိုးရသည် တရုတ်ပြည်တော်လှန်ရေးတွင်အသက်ပေးသွားကြသော ၄င်းတို့ ၏ ရဲဘော်ရဲဘက် များ၏ ရုပ်အလောင်းများကို တက် မုဒိန်းကျင့်လိုက်သည် နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည့် ကိစ္စဖြစ်၏။
တရုတ် အစိုးရလောက်ဖောက်ပြန်သည့် ကွန်မြူနစ် အစိုးရ ဤ ကမ္ဘာပေါ်တွင်မရှိသေး။ ကမ္ဘာ့ အဖိနှိပ်ခံအလုပ်သမားထုကြီးအတွက် အလုပ်အကျွေးပြုနေသည် ဆိုသော ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ၀ါသနာအရ ဖြစ်လာသည့် ဖာသည်မ ဓမ္မတာလာသည့် ဂါဝန်ဖြင့် အလံထူပြီးတရုတ်အစိုးရက အကြိမ်ကြမ် ဗလက္ကာရ တ၀ပြုကျင့်ရင်း
နအဖ ဖာခေါင်းနှင့်အကြောင်းသင့်သောကြောင့် ဖောက်ပြန်ပါသည်ဆိုသည့်အရင်းရှင် နိုင်ငံများထက်ပင် ဖောက်ပြန်သည့် လုပ်ရပ်ဖြင့်တောက်လျှောက် မျက်နှာပြောင်နေခဲ့၏။
နယ်ချဲ့ လက်ပါးစေ ၊ မြေရှင် ချစ်တီးတို့၏ ဇာတိသား ၊ ရထားလမ်းမြင်လျှင် ဖင်မလှန်ပဲ မနေနိုင်သော ကုလား တို့ ကလည်း နအဖ စစ်အာဏာရှင်ထံမှ ပေါချောင်ကောင်း အလကားနီးနီးရနေသော မြန်မာ့ သယံဇာတအရင်းအမြစ်တို့ အတွက် နအဖ ၏ ယုတ်ချင်တိုင်းယုတ် ရမ်းချင်တိုင်းရမ်းနေသော
ကိစ္စရပ်တိုင်းအား တုံဏှိဘာဝေ သူနှင့်မဆိုသလို နေ တတ်သလို နေကာ ရသမျှ နှိုက်ယူ၏။
တောက်လျှောက် အမြဲ တန်း နအဖ ဖက်က ရပ်တည်ကာ အမြတ်ထုတ်နိုင်သမျှ ထုတ်ဖို့ ရန်သာ စိတ်ကူးရှိသည့် အာစီယံနိုင်ငံများကတော့ ယခုအခါ အီးယူ ၏ ဖိအား ၊ကမ္ဘာ့ဖိအားတို့ ကြောင့် အပြင် အနည်းငယ် စောက်ရှက် ရှိပုံရသေးသော ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်၏ ကောင်းမှုတို့ ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား
မတရား အမှုဆင် ဖမ်းဆီးသော နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှုကြီး ကို ပထမအကြိမ်အဖြစ် ပြစ်တင်ရှုံ့ချလိုက်ကြ၏။
အမေရိကား က ဟီလာရီတို့ ၊ အိုဘားမားတို့ ကလဲ ဒေါသတွေ ထွက်ပြနေကြ၏။ ဘန်ကီမွန်းဆိုသည့် မျက်မှေး ချဉ်ဖတ် သည် ကလည်း ကမ္ဘာကြီးနှင့် တလေသံထဲထွက်စေရန်သူ့ ခမျာ ကြိုးစားသေး၏။
ပကတိ ဖြစ်စဉ်အား ချည်းကပ်ခြင်းအကျဉ်း
ဘိုသန်းရွှေတို့လေဒီ ဒန်ဒရိုဘီယံသိန်းစိန်တို့ကတော့ မမှု။
တကယ်တန်း သူတို့ အနေနှင့် အာစီယံထဲမှ အချိန်မရွေးထွက်သွားနိုင်လောက်သည့် အနေအထားများရှိနေ၏။
နအဖ သည် ဆမူဆာ နှင့် အီကြာကွေး ရှိနေသမျှ အထီးကျန်ဖြစ်မှာ သိပ် ဂရုစိုက်လှသည်မဟုတ်။ မြောက်ကိုရီးယား ၏ အနုမြူစီမံကိန်းအတွက် ကုန်ကြမ်းရောင်းခြင်း ၊ ရုရှား ၏ အနုမြူ စီမံကိန်းများအတွက်ကုန်ကြမ်းရောင်းခြင်း၊ လောင်စာနှင့်စွမ်းအင် ဆာလောင်နေသော တရုတ်နှင့် ကုလားအား
သဘာဝအရင်းအမြစ်များရောင်းချခြင်းတို့ ကို လုပ်နေနိုင်သမျှ ၊ နအဖ အနေဖြင့် နည်းနည်းမျှ မမှု။
အမေရိကန် ၊အီးယူနိုင်ငံများနှင့် ထိုင်းပါသော အာစီယံတို့က စာတွေထုတ် ၊ ဒေါသတွေထွက်ပြ အပြစ်တွေပြောနေကြသော်လည်း တကယ်တန်း တော့ အမေရိကန် သည် နအဖ ထံမှ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် အကျိုးအမြတ်ရှိနေ၏။
အမေရိကန် အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူလူထုနှင့် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အကျဉ်းကျခံနေရသော လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲဝင် သူအပေါင်းအား စာနာပါလျှင် ၄င်းတို့ နိုင်ငံမှ ချယ်ဘရွန် ကုန်မဏီ အား နအဖ နှင့်ပူးတွဲလျှက် အကျိုးအမြတ်ရှာနေသည်ကို
ချက်ချင်းရပ်တန်းကရပ်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သလို အီးယူ အုပ်စုသည်လည်း တိုတယ် ကုန်မဏီကို မြန်မာပြည်တွင်းမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာစေရန် လုပ်ဆောင်သင့်၏။
ပခြုပ်ဆိုင်စကားနှင့်ပြောရသော် အိုဘားမားသည်လည်း ကတုံးရိတ် ဦးထုတ်ဆောင်းလာသည့် အသစ်ကလေး သာဖြစ်၏။ တကယ်တော့ သူလည်း American interest ကို အထိခံကျော်လွန်ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံလုပ်မည့် လူမဟုတ်။
နအဖအနေဖြင့် American interest ကို တည့်တည့်ထိမှသာလျှင် ထိထိရောက်ရောက်တုန့် ပြန်မည့် သူဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ သည်လည်း ကမ္ဘာ့ အခွက်အပြောင်ဆုံး ဗျူရိုကရက်များ ၏ စုရပ်ဆုံရပ်ဖြစ်၏။ အားကိုးလောက်ဖွယ်မရှိ။ နအဖစစ်အာဏာရှင်အနေဖြင့် ထိုအရာအားလုံးအား ကောင်းကောင်း သိပြီးသားဖြစ်၏။ နိုင်ငံတကာ ခုံရုံးတော်အထိ ဘို သန်းရွှေနှင့်အပေါင်းပါများ၏ ကုတ်ကို ဆွဲပြီး ပို့ ဖို့ ဆိုသည့် ကိစ္စ
စာရွက်ပေါ်မှာပင် အတည်ပြုနိုင်ဖို့က ခက်နေသေး၏။ သို့ သော် ထို သူတို့ လားရာလမ်းမှာ ထိုလမ်းကိုပင်ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ဖြစ်နေ၏။ သို့ သော် ယခု အခါသည်ကား ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဂျွန် လ အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်၏။ နအဖ ၏ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည်ကား ဘာမျှမလိုတော့။
ယခု အချိန်တွင် နအဖ စစ်အာဏာရှင် တို့ အား စားမ၀င်အိပ်မပျော်စေသောကိစ္စသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်၏။ တပ်မတော်သားများဖြစ်၏။ ပြည်သူလူထု ကြီးဖြစ်၏။
နအဖ သည် ၂၀၁၀ ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မည် ဖြစ်၏။ထို သို့ ဖြစ်အောင်လုပ်သည့်လမ်းခုလတ်တွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွေ့ အကြုံကိုရရှိထားသော ရဟန်းရှင်လူပြည်သူလူထု၏ အုံကြွတော်လှန်မှု ၊တပ်မတော်တွင်းအုံကြွ လာနိုင်မှု စသည့်အလားအလာများအား ၄င်းတို့ လည်း ကောင်းကောင်းမြင်ကြ၏။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှလို နိုင်ငံမျိုးကလည်း နအဖ စစ်အာဏာရှင်အား ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဖြင့် ကျပ်၏။
ရိုဟင်ဂျာတွေ ဘာဆိုသည် ၊ ရိုဟင်ဂျာ၏အရင်းအမြစ်ဘာဖြစ်သည်ကို လည်း ၄င်းတို့ ကောင်းကောင်းသိ၏။ တရုတ်ပြည်ကျောထောက်နောက်ခံယူထားသော ၀ သ ပ လို အဖွဲ့ အစည်းကလဲ ယခု အခါ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ အစိုးရဟု တရားဝင် အမည်တပ်ကာ အမြဲတန်း တပ်မတော်တစ်ခု ကို
အခြေတကျတည်ဆောက်ထားပြီး နအဖ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ်မလုပ်နိုင်ဟူသော လေသံပစ်လာ၏။ ဓါးပြသာသာ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ အစည်းများ ကိုတော့ နအဖ က တကယ်တန်း ဂရုမစိုက်။
ယခုအခါ နအဖ သည် အလောသုံးဆယ် တွက်ကာ ဂွင်ရိုက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားဖမ်းဆီးလိုက်မှု သည် ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး၏ စိတ်နှလုံးကို ကြိမ်မီးအုံးးအောင် လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြန်လွှတ် သည်ဖြစ်စေ မလွှတ်သည်ဖြစ်စေ ၄င်းတို့ အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ၊သံတမန်ရေး ၊စစ်ရေး ၊ လူမှုရေး၊စီးပွားရေး အမြတ်ရလာစရာမရှိ။ ထို့ ကြောင့် ၄င်းတို့ အနေနှင့်လုပ်လာနိုင်သည်မှာ ၂၀၀၇ အရေးတော်ပုံအပြီး ချက်ခြင်း တက်သုတ်ရိုက် အာရုံပြောင်း ၍ အခြေခံဥပဒေ
အတုအယောင် အား အသက်သွင်းရေးလှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပါတ်သက်သော ကြေငြာချက် တစုံတရာထွက်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိ၏။
အလံနီ လက်နက်ချ သုဝေနှင့် ပေါကြောင်ကြောင် အချောင်သမား ရဲထွန်းတို့ကဲ့သို့ သော ခွေးမသားကြီးများ အနေဖြင့်ကတော့ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာဖို့ လိုသည့်မူအတိုင်း ဆက်လက် စိုင်းပြင်းလုပ်ဆောင်မည်မှာမုချဖြစ်၏။
တတိယအုပ်စု ဆိုသည့်ကောင်များကလည်း လူလည် လူနပ် လူတွင်ကျယ် တို့ ၏ ထုံးစံအတိုင်း ကျားအို ချီလာသော သားကောင်မှ အရိုးအရင်း ကိုက်ရန် ၀ိုင်းအုံစောင့်စားနေကြသော ခွေးအ များကဲ့သို့ အခြေအနေနှင့်အချိန်အခါကို အသုံးချဖို့ ရန်ကြိတ်ပုန်း ခုတ်နေကြမည်ဖြစ်၏။
လူထုသည်သာ သမိုင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့် အင်အားစုဖြစ်၏။ လူထုသည်သာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြိုချနိုင်သည့် စွမ်းပကားရှိ၏။ ထို့ ကြောင့် လူထုကြီးတရပ်လုံး အနေဖြင့် ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသိက္ခာမဲ့နေသည့်ဘ၀များမှ ရုန်းထွက်ပြီး အုံကြွတော်လှန်မှုမရှိသမျှ စစ်အာဏာရှင်သည် နာမည်ပေါင်းစုံပြောင်း
မျက်နှာဖုံး ပေါင်းစုံ ထည်လဲ သုံးကာ သာ နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အချာအာဏာကို မတရား လုယူ ရက်စက်နေဦးမည်ဖြစ်ပေ၏။
နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတို့အနေဖြင့်လည်း ၊ နအဖ သံရုံးတို့အား သွားရောက် ဆန္ဒပြသည်ထက် တရုတ် ၊ ကုလားတို့ ၏ စောက်ရှက်မဲ့လုပ်ရပ်များအား သူတို့ ၏ သံရုံးများ ရှေ့ တွင် ဖွင့်ချ တောင်းဆို ဆန့် ကျင်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ချယ်ဘရွန် နှင့်တိုတယ်ကဲ့သို့ သော ကုန်မဏီများ၏ ရုံးစိုက်ရာ ဌာနချုပ်များ
ဌာနခွဲများရှေ့ တွင်ဆန္ဒပြ ဆန့် ကျင်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုလိုနေရာများတွင် ချယ်ဘရွန် ဓါတ်ဆီဆိုင်များအား အမေရိကန် ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးမှ ဘွိုင်းကောက်လုပ်လာနိုင်သည်အထိ ကန်ပိန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ခေါင်းဆောင်များဆိုသူတို့ ကလည်း
လေကြီးလေကျယ်တွေ ကွန်ပြူတာရှေ့ ထိုင် ကာ စိတ်ကူးပေါက်တိုင်း ဟိုဟာဖြစ်ပြန်ပြီ ဟိုဒင်းဖြစ်ပြန်ပြီ ခင်ဗျားတို့ ချ ကျနော်တို့ ထိုင်ကြည့်မယ် ဆိုသောလုပ်ပေါက်များ ဖြင့် ရေပွက်ရာငါးစာချမနေတော့ပဲ ။ အစီအစဉ်ရှိရှိ ၊ မူပေါ်လစီ တကယ်ခိုင်ခိုင်ခန့် ခန့်ဖြင့် ရေရှည် တိုက်ပွဲဆင်နွှဲမည့် အမြုတေများကို
မွေးထုတ် ကူညီ အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းအား ပြင်ဆင်ချိန်ကျန်နေသေးသည်ကို အလွဲသုံးစားမလုပ်မိကြဖို့ လို၏။
ယခုအချိန်တွင် ပြည်ပရောက် ခေါင်းဆောင်များ ၊တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအနေဖြင့်၊ ရောင်တော်ပြန်လွှတ်ခြင်း ၊ သူကြီးသမီးလင်နောက်လိုက်တိုင်း ပုတ်ထဲဝင်ပုန်းခြင်း ကိစ္စရပ်များအတွက်ခြေရှုပ်လျှက် ပီတိတွေအဖြာကြီးဖြာကာ မနောခွေ့ နေခြင်းများအားရပ်တန်းကရပ်၍ တိုက်ပွဲဝင်ပြည်သူလူထုကြီးကို ဆရာလုပ် ပဏာယူခြင်းများ မပါပဲ ထိထိရောက်ရောက် ကူညီခြင်းဖြစ်သော တိုက်ပွဲ နည်းနာ ၊ အတွေ့ အကြုံ ၊ အတွေးအခေါ် ၊ အယူအဆပြတ်သားခိုင်မာမှုများဖြင့် ကူညီရန်အချိန်ကာလဖြစ်သည် ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးအပ်ပါသည်။
Posted by Nyein Zay Oo at 5:34 PM 1 comments
စာပေအနုပညာ၊ တော်လှန်ရေး၊ အခွင့်အလမ်းနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ
လူမျိုးတစ်မျိုး၏ ယဉ်ကျေးမှု အတိမ်အနက်ကို ထို လူမျိုး၏ စာပေ အနုပညာ အတိမ်အနက်ကိုလေ့လာခြင်းဖြင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခန့် မှန်း သုံးသပ်နိုင်၏။
တိကျသော အဖြေထွက်လာမည်ဟုတော့မဆိုလို ၊သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ၊နိုင်ငံရေးစနစ်၊ စီးပွားရေးနှင့် ဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်များ နှင့်အတူ အခြားသော ကျယ်ပြန့် သည့်ကိစ္စရပ်များ အားလုံးကို စနစ်တကျလေ့လာပြီးမှသာလျှင် ပကတိအနေအထား၏ အဆင့်အတန်းအမှန်နှင့် အနီးစပ်ဆုံးအဆင့်အထိ
လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသော လူ့ အဖွဲ့အစည်းတရပ်တွင် ပဋိပက္ခများ ရောပြွန်း နေသကဲ့သို့ထို ပဋိပက္ခများ ကိုလည်း တခုချင်း တဆင့်ချင်းသို့ မဟုတ် တူရာတူရာကဏ္ဍအလိုက် အဖြေရှာသွားရင်း တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းကြ၏။ ထို ကဲ့သို့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ
အချင်းချင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ရှေ့ ဆက် လုပ်ဆောင် အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြင့် လျှောက်လှမ်းကြရ၏။
စာပေအနုပညာတွင် တင်ပြပုံအမျိုးမျိုးရှိကြသလို အနှစ်သာရအမျိုးမျိုးရှိကြ၏။ ရည်ရွယ်သော စေတနာ အမျိုးမျိုးရှိကြ၏။
တိုင်းပြည်တပြည်အတွက် အကျိုးပြုစာပေ နှင့် အာဏာရှင်အလိုကျ ဖင်လျှက်ဆားဖြူး အမြီးနှန့် လျှာထုတ် စာပေ ဟု အကြမ်းအားဖြင့် သတ်မှတ်ကြည့်ပါမည်။
ဖင်လျှက်ဆားဖြူး စာပေသည် မျက်နှာလုပ် ၊ ညာဝါး ဖား သော အရေးအသားနှင့်ဦးတည်ချက်ဖြစ်သဖြင့် အကောင်းပြောခံရသူ ရေးခံရသူ အတွက်တော့အကျိုးရှိသည့်စာမျိုးဖြစ်၏။ မှန်ဖို့မလို ၊ တတိုင်းပြည်လုံး တကယ် အကျိုးရှိဖို့ မလို ၊ ကိုယ် ဖားလိုသူ က သဘောကျဖို့ သာလိုသည်။
ထိုအတွက် ထိုကဲ့သို့ စာမျိုး၏ ပရိသတ်သည်ကား အဖားခံ အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် အရိုးအရင်းကိုက်အသိုင်းအ၀ိုင်းသာဖြစ်၏။ လူထုကြီးတရပ်လုံးအတွက်တော့ ခွေးအံဖတ်ထဲက အမူးသမား၏ ချီး တုံး သာဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်သည် အမိမြန်မာပြည်ကြီး ဒီမိုကရေစီပြည့်ဝစွာ၊ ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံး ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ အပူအပင်ကင်းလျှက် ၊ တခြား နိုင်ငံမှ အိမ် အကူအလုပ်သမားများအားငှားရမ်းလျှက် ၊ ထိုအိမ်အကူအလုပ်သမားများကိုလည်း လေးလေးစားစား လူသားဆန်ဆန် မစော်ကားပဲ ဆက်ဆံမှုဖြင့်
ချမ်းသာသော နိုင်ငံကြီးဖြစ်စေချင်၏။ အမိမြန်မာပြည်၏ တပ်မတော်ကြီးသည် တကယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိ ၊တကယ်လေးစားထိုက်ဖွယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ဗိုလ်မှူးကြီးများ အရာရှိအရာခံအကြပ်တပ်သားများချည်ပဲဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးက မေတ္တာထား ချစ်ခင်၍ တပ်မတော်သားကြီးများကိုမြင်လျှင်
ရပ်ကွက်ထဲ ကမူးရှူးထိုး ခွေးရူး ၀င်လာသလို ရှဲကနဲရှောင်မသွားကြပဲ အားရှိပါးရှိ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရင်း မိသားစုဝင်များကဲ့သို့ ဆက်ဆံသည်ကိုမြင်ချင်၏။ အကျဉ်းချုံးပြောရမည်ဆိုလျှင် ပြည်သူတယောက်အနေဖြင့် တပ်မတော်နှင့်တိုင်းပြည်ကိုယခုအနေအထားနှင့်ဆန့် ကျင်ဖက်အနေအထားကို မြင်ချင်၏။
သည်တော့ ယခု လက်ရှိတပ်မတော်ကိုအတင်းရောအဓမ္မပါ သေခါနီး ပင်စင်ယူရမည့်အချိန်ကို ကျော်လွန်သည်မှာ မေ့လောက်လျော့လောက်သည်ရှိသော်လည်း အရှက်မရှိ ကုတ်ကတ်နေလျှက် ဗိုလ်ကျနေသော လူယုတ်ကြီးများ၏ လက်အောက်မှ ထုတ်ဝေရေးသားသည့် သတင်းစာများ ၊ဂျာနယ်များထက်
ပြည်ပရောက် သတင်းဌာနများ အား ပိုမိုအဖတ်များ၏။ ပိုမို၍လဲ အားကိုး မိ၏။
မြန်မာစကားမြန်မာစာဖြင့် ဖော်ပြရေးသား ထုတ်လွှင့်ကြသော
ပြည်ပရောက်သတင်းဌာနများ အား အကြမ်းအားဖြင့် အမျိုးအစားခွဲရမည်ဆိုလျှင် ၊ နိုင်ငံခြားအစိုးရများ ၏ ကိုယ်ပိုင်သတင်းဌာနများ ၊ နိုင်ငံခြားအစိုးရမှ မတည်ထောက်ပံ့ထူထောင်ပေးထားသော သတင်းဌာနများ နှင့် နိုင်ငံခြား အဖွဲ့ အစည်း လူပုဂ္ဂိုလ် တို့ ၏ ထောက်ပံ့ ပေးကမ်းမှုဖြင့် ရပ်တည် နေသော
သတင်းစာ ဂျာနယ်များ အင်တာနက် စာမျက်နှာများဟူ၍ မြင်ရ၏။ ထို့ နောက် ဘလော့ဆိုသည့် အင်တာနက်စာမျက်နှာ များ ပေါ်လာ၏။ ဘလော့ဆိုသည်များကတော့ ငွေကြေးအထောက်အပံ့ရဖို့ မလို ၊ တနိုင်တပိုင် အချို့ ကရေးသားကြ၏။ အချို့ က အဖွဲ့ငယ်လေးများဖြင့်ရေးသားကြ၏။ ယခုဆွေးနွေးသော
ဤအမျိုးအစားသုံးခုသည် အကြမ်း အားဖြင့်သာ ဖြစ်၏။
ဆိုတော့ကာ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနများ၏ မြန်မာဘာသာဌာနခွဲများသည် ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်၏ အာဘော်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီ ၊ ၀ါဒဖြန့် ချီရေး ပစ်မှတ်တို့ အပေါ်မူတည်၍ သတင်း များ အာဘော်များ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်းများ ကို တင်ပြကြ၏။ ထိုသို့ တင်ပြကြရာတွင် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအား ပင်တိုင်တာဝန်ယူ
ရသော သူတို့ ၏ မိမိမွေးဖွားရာဇာတိ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအပေါ်ထားရှိသော စိတ်စေတနာ ၊ ကိုယ်ပိုင် နိုင်ငံရေး ခံယူချက် ၊ ပညာရေးနောက်ခံ ၊ တွေးခေါ်နိုင်မှုအရည်အသွေးပေါ်မူတည်ကာ ထိုသတင်းကဏ္ဍ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိုင်းတာကြည့်၍ ရ၏။
တချို့သော တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမေးမြန်းခန်းပိုင်ရှင်များ၏ အရည်အသွေးနှင့်တိုင်းပြည်ပေါ်ထားသည့် စိတ်ဓါတ်က အိမ်ခြေ သုံးဆယ်ခန့် စီရှိသော ရွာနှစ်ရွာ နွေခေါင်ခေါင် လယ် ကွင်းထဲတွင် ဘုန်းကြီး၏ ကမကထ ပြုမှုဖြင့် ဘောလုံးချိန်းကန်သည်ကို မန်ကျည်းပင်ထိပ်တက် ၊
အရင်ခေတ်လမ်းလျှောက်ထီရောင်းသမားများ ရွာထိပ်ရေအိုးစင်တွင် မေ့ ခဲ့သော အော်လံကို အပီအပြင် ကိုင်ကာ လိပ်ခေါင်းထွက်အောင် အော်ဟစ် ကြေငြာ သော ကျပ်မပြည့်သည့် သူ ၏ အော်လံကိုတောင် ကိုင်နိုင်သည့်အဆင့်မရှိ။ထိုသူများသည် မြန်မာ စကား တတ်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို လေး နည်းနည်းပြောတတ်ရေးတတ်ယုံသာရှိကြ၏။
အသံလွှင့်ဌာနများ တွင်အလုပ်မလုပ်ပဲ အပြင်ထွက် အလုပ်လုပ်မည်ဆိုလျှင် စက်ရုံထဲ ပြူးတူးပြာတာ ဆူပါဗိုက်ဇာ ကို ရက်ဆာ..ရက်ဆာနှင့် တဆာထဲဆာနေကြမည့် ဆရာများဖြစ်၏။ သို့ သော် သူ့ အရပ်နှင့်သူ့ ဇာတ်ကတော့ တင့်တယ်နေ၏ ။ တကယ် ကိုယ်ကျိုးနည်းသည်က ကိုယ့်တိုင်းပြည်ဖြစ်၏။ ၀ံသာနု
စိတ်ဓါတ် ၊ မှန်ကန်သော တွေးခေါ်မှုဖြင့် အသံလွှင့်ဌာနများ အား ဆိုင်ရာတိုင်းပြည် ဆိုင်ရာအသံလွှင့်ဌာနတို့ ၏ မူ ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတို့ နှင့် လည်း မဆန့် ကျင် ၊ ကိုယ့် ပြည်သူ ပြည်သူများအားလည်းကူညီနိုင်သော အနေအထားကို ဖန်တီးယူ လို့ ရ၏။ သို့ သော် ပုံမလာ ပန်းမလာ များသာ မြင်နေကြားနေရ၏။
ကဲ.. သို့ ကလိုဖြင့် အခြားသော ပါးစပ်ကြီးများဖြင့်မအာနိုင်သည့် သတင်းဌာနများကရော။နာမည်ကြီးသတင်းဌာနများ ကိုကြည့်ကြပါစို့ ။
အိန္ဒိယပြည် အခြေစိုက် သတင်းဌာနနင့်၊ ယိုးဒယားပြည် အခြေစိုက်သတင်းဌာနများ ကိုတစေ့တစောင်းအကဲခတ်ရမည်ဆိုလျှင်.....အိန္ဒိယပြည်အခြေစိုက်သတင်းဌာန မှဆရာသမားများက ယိုးဒယားပြည်မှ ဆရာသမားများထက်စာလျှင် လူစကား နားလည်သေးသည်ဟု ကောက်ချက်ချရမည်။
သို့ သော် သူတို့ သည်လည်း စွတ်ရေး စွတ်တင် အကျင့်က အပြည့်။
ယိုးဒယားပြည်သတင်းဌာနများ အား တစေ့တစောင်းကြည့်မည်ဆိုလျှင် ခေတ်ပြိုင်နှင့် ဧရာဝတီဟူ၍ အထင်ကရမြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီ ကတော့ ဟိုက်စကူး ကျောင်းသား အရေးအသားဖြင့် အင်္ဂလိပ်လို စာမျက်နှာလည်းရှိပြန်၏။
ဧရာဝတီ သတင်းဌာနအားထူထောင်သူ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ စိတ်မ၀င်စား၊ ဘယ်သူတွေ ရေးသားလုပ်ကိုင်နေသည်ကို စိတ်မ၀င်စား ။ ပြူးတူးပြဲတဲ လုပ်တိုင်း စာလုံးကြီးကြီးဖြင့် အလန့် တကြားဖော်ပြတိုင်း လူဖတ်များမည် စောင်ရေတက်မည် ဆိုသည့် အမြင်ဖြင့် ရပ်တည်သော သတင်းဌာနသည်ကားခပ်ညံ့ညံ့ သတင်းဌာန နှင့် ချာတူးလန် ဂျာနယ်လစ်စ်ဆိုသူများတို့ သာ စုဝေးနေသော သတင်းဌာနဖြစ်၏။
အိုးဝေ ဦးညိုမြလို လူမျိုး တကောင်မှ မရှိ။ ပျိုးမွှေ အရူးလိုဖွ အဆင့်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ပြောလိုက်လျှင် ကျနော်တို့ မီဒီယာသမား ကျမတို့ မီဒီယာသမား သူ့ မေဟိုဒင်း ကင်းကိုက်ပျားထိုး မီးလောင်သလို အထာတွေနှင့် မီဒီယာသမားလိုက်ရသည့်ဖြစ်ခြင်း တကယ် အရည်အသွေးပြည့်မှီသည့် သတင်းသမားတွေ
သရော်စာ ဆိုပြီး တကယ်အတည်ပေါက်ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရေးသလိုလို impersonate လုပ်သလိုလို အရေးအသားဖြင့် လည်း သရော်စာ ပါဟု ဖော်ပြလိုက်သေး၏။ မှတ်ချက် ။ ။ သရော်စာဖြစ်သည် ဆိုပဲ။လေးစားဖွယ် အတိ။ အော် အဲဒါသရော်စာကိုး လို့ ဖတ်ပြီးမှ ပဲ သရော် စာ ဟု ယူဆလိုက်ရ၏။
မရယ်ရပါ။ မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသော လူထုခေါင်းဆောင်ကို သေးသိမ်အောင် ၊ လူရယ်စရာဖြစ်အောင် ၊သန်းရွှေ ကို လျှော့ပေါ့တွေးအောင် ၊ အော် ဒီလူကြီးက ဟာသကြီးပါ ဆိုတာလောက်ပဲဖြစ်သွား အောင် ဆိုသည်ကလွဲလို့တခြား ရယ်ဖွယ် တခုမရှိ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ကို အားမရသည်မှာ
မှန်ပါ၏။ ကိုယ်တိုင်လဲအားမရပါ။ သို့ သော် ကျန်ုပ်တို့ က နိုင်ငံခြားနေပြီး သေနတ်နှင့်အဝေးကြီး ။ ကြံ့ဖွတ်ဝါးရင်းဒုတ်နှင့်အဝေးကြီး ။ အချုပ်နှင့်ထောင်နှင့်အဝေးကြီး ကိုယ်ကျိုးနည်းမှုများနှင့်ယူဇနာတသိန်းလောက်က ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်နှင့် အဖွဲ့ချုပ်၏ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခွဲထုတ် မြင်ကြည့်ရန် ကြိုးစားခြင်းသည် မလျှော်ကန်ပါ။
ယခုထိ တိုက်ပွဲထဲတွင် ရန်သူ့ဝိုင်းပိတ်မှုကြားတွင် အတွေးအခေါ်လက်နက်မချပဲ မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ အလံကို ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲကိုင်ကာ ရပ်တည်ရင်း ပေးဆပ်လုပ်ကိုင်နေသော သူများ အား အားမရသည်မှန်သော်လည်း စော်ကား ရန်အကြောင်းမရှိပါ။
ဆရာကြီးဦးပုည၊ဆရာကြီးအချုပ်တန်းဆရာဖေ၊ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ဆရာကြီး အီကြာကွေး ဆရာကြီး သော်တာဆွေ ၊ ဆရာကြီးဂျက်(ကွမ်းခြံကုန်း) တို့ ၏ သရော်မှုများ ဟာသများ ၊ ကမ္ဘာ့ သရော်စာ သမိုင်းတွင် Medieval Europe ခေတ်၊ ဘော်လတဲယားတို့ ခေတ်မှသည် ယခုခေတ် Talk-show များဖြစ်သော အမေရိကန်ပြည်မှ ဒေးဗစ်လက်တာမန်း၊ ကိုနန်အိုဘရိုင်ရမ်တို့ အထိ ထိုသူတို့ ၏ ဟာသများ သရော်မှုများ ကို ပြန်ကြည့်လျှင်သိနိုင်ပါသည်။ စောက်ပေါနာမည်ဖြင့်ရေးချင်ရာရေးတိုင်းသရော်စာဟု ပြော၍မရပါ။ မကျိ်န်းသေလိုက်ပုံက လဲ မှတ်ချက်ပါ ထည့်ပေးရသည့်ဘ၀ဖြင့်ဆိုတော့ အင်မတန်သနားဖွယ် ဖြစ်ပေတော့၏။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ငပွအရေးကျွမ်းကျင်သူ ဆိုသည့်ကောင်များ လို "ဟိုနိုင်ငံတုန်းကဟိုလိုလေ၊ ဟို ဟာက ဟိုလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် ၊ လေ့လာမိသလောက်က ၊ ဒါက ဒီလိုပါ" ဆိုသည့် ရမ်းရွှီးအာဝါး မှုများကြောင့် ကိုးကားပြောဆိုမှု ပြုရသည်ကို မြင်ပြင်းကပ်သော်လည်းကိုးကား ပြောဆိုမှုများလိုအပ်ပါသဖြင့် ကိုးကားပြောဆိုပါမည်။ ကိုးကားပြောဆိုမည်ဟု ပြောမိသဖြင့် စာအုပ်စင်မှ Dictionary of Literary terms & literary theory စာအုပ်ထဲမှ စာကြောင်းအချို့ ကို ကိုးကား တင်ပြပါမည်။" The satirist is thusakind of self-appointed guardian of standards, ideals and truth; of moral as well as aesthetic values. He isaman(women satirists are very rare)who takes it upon himself to correct, censure and ridicule the follies and vices of society and thus to bring contempt and derision upon aberrations fromadesirable and civilized norm.Thus satire isakind of protest,asublimation and refinement of anger and indignation.As Ian Jack has put it very adroitly:'Satire is born of the instinct to protest;it is protest become art.'" ဒီတော့ ခပ်ညံ့ညံ့ ခပ်ချာချာ အရေးအသား ၊ ဗဟုသုတ ၊ညာဏ်ရည် ၊ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနိမ့်ကျမှုမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် အတည်ပါအဟုတ်ပါ မိုးကြိုးပစ်သရော်စာပါဟူသော အမှိုက်သရိုက်မျိုး မျက်စိစူးဖွယ်ရာဖြစ်လာတော့၏။
ဝေဖန်ရေး ကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် မိတ်ဘက်ဆိုင်ရာဝေဖန်ရေး နှင့်အပြုသဘောဆိုင်ရာဝေဖန်ရေး ဆိုသည့်ကိစ္စကို ကြည့်ကြပါစို့ ။
ဝေဖန်ရေးတွင် အရိပ်အမြွက်ပြဝေဖန်ရေးရှိ၏။ သွယ်ဝိုက် အသိပေး ဝေဖန်ရေးရှိ၏။ ထိုအဆင့်များကိုကျော်လွန်၍ ကျွဲပါး စောင်းတီးဖြစ်လာချိန်တွင် ဗြောင် ပြော ဗြောင် ဆန့် ကျင်ဝေဖန်ရသော ဝေဖန်ရေးရှိ၏။
ဝေဖန်ရေး (Critique) လုပ်ရာတွင် နည်းပညာတစ်ရပ်ကို ဝေဖန်သော technical critique , လေ့လာ စမ်းသပ်မှုတရပ်ကို ဝေဖန်သော ဝေဖန်ရေး research critique ၊ အင်အားစုတရပ်အဖွဲ့ အစည်းတရပ် ကိုဝေဖန်သော ဝေဖန်ရေး organizational critique စသည်ဖြင့်ရှိကြ၏။
နည်းပညာ နှင့် လေ့လာစမ်းသပ်မှုများကိုဝေဖန်သော ဝေဖန်ရေးတွင် Data, variables, qualitative or quantitative , end results, trends, method, analytical approaches, စသည်ဖြင့် ရှိသကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းတခု ခေါင်းဆောင်မှုတရပ်အင်အားစု တခု ၊လူတဦးတယောက်ကိုဝေဖန်ရာတွင်လည်း
အလားတူ ချည်းကပ်မှုများဖြင့် ဝေဖန်ကြ၏။ ငါ့စကားနွားရ ပြောဆို ငြင်းခုန်ခြင်းသည် ဝေဖန်ရေးမဟုတ်။ ငါ့အင်တာနက်စာမျက်နှာ ဘယ်သူတွေပဲလှူလှူ တကယ်တန်း ကိုင်ထားတာငါ ၊ငါရေးချင်တာရေးမယ် ငါတင်ချင်တာတင်မယ် ဆိုသည့် လုပ်ရပ်သည်လည်း မူမှန် အဆင့်ရှိသော သတင်း ဌာနမဟုတ်။
ကျွန်ုပ်ဝေဖန်ရေး တော်တော်များများ ရေးဖူးပါ၏။ သရော်စာတော်တော်များများရေးဖူးပါ၏။ကဗျာပေါင်းများစွာရေးဖူးပါ၏။ ကျွန်ုပ်ရေးသားသော စာများ ၊ ဝေဖန်ရေးများ ၊သရော်စာများ၏ end results အဘယ်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်ဝေဖန်သော ကွန်ုပ်သရော်သော ရေးသားချက်များကိုခံရသောသူများသာလျှင်သိပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်မသိ။ သို့ သော်
ရည်ရွယ်ချက်မှန်ရန်တခုကိုသာကျွန်ုပ်အဓိကထား၏။ စာလုံးရွေးချယ်မှု မလုပ်၊ တန်း ချရေး တန်း ပို့ လိုက်သည်သာဖြစ်၏။ သို့ သော် ကျွန်ုပ်ရင်တွင်းဆန္ဒနှင့် စေတနာသည် မုန်း၍ မဟုတ် ။ ချစ်၍လဲမဟုတ်။ ပြည်သူလူထုထဲကပြည်သူတဦးအနေဖြင့် ရေးသင့်သည် ရေးမည်ဟုဆုံးဖြတ်ကာရေးချင်းဖြစ်၏။
ထိုသို့ ရေးသားရာတွင်လဲ သတင်းဌာနများ အင်တာနက်ဆိုက်များကို မပို့ ။ မိတ်ဆွေဖြစ်သူ ဆီသာ ပို့ သည်ကများသလိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖန်တီးထားသောနှစ်ပဲ တပြားမကုန်သည့်ဘလော့လေးတွင်
ကျွန်ုပ် ၏ စာလုံးများသည် ရိုင်းသည်။ တုတ်ထိုးအိုးပေါက်ဖြစ်သည်။ စသည်ဖြင့်ပြောချင်ရာပြောစေတော့ ကိစ္စမရှိ ။ လွန်ခဲ့သော အခါတပါးက ဘလော့အကယ်ဒမီကိစ္စ ကျွန်ုပ်ကောက်ရေး၏ ။ ငှက်ကထကိုမောင်မောင်မြင့်က ၀မ်းနည်းပက်လက်လာရေးသွား၏။ ဟုတ်ပြီ အဲသည်နောက်ပိုင်း သူပြောသည့်အထဲက ယူသင့်သည့်ဆင်ခြင်သင့်သည့်ကိစ္စရပ်များ အား ဆင်ခြင်၏။ ယူ၏။ (နို့ ....
မုန်းကြလို့ မှဟုတ်ပဲကိုး၊ ကိုးယိုးကားယား လမ်းစဉ်လူငယ် မီးသတ်ဝတ်စုံဝတ် ဘုရားပွဲမှာမြောက်ကြွမြောက်ကြွဖြစ်သည်နှင့်တူသကဲ့သို့ကမောက်ကမဖြစ်၍သာရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ )
တော်လှန်ရေး နှင့် အဖွဲ့အစည်း
နောက်ဆုံး ကောက်ချက်ချရမည် ပြောရမည် ဆိုလျှင်တော့ ဧရာဝတီ သတင်းဌာန၊ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန ၊ခေတ်ပြိုင်သတင်းဌာနတို့ သည် ၁၉၈၈ တော်လှန်ရေး၏ အသီးအပွင့်များထဲမှ သတင်းလောကတွင်အောင်မြင်လာသော အသီးအပွင့်များဖြစ်ကြပါ၏။ ထိုကြောင့်လှပမွှေးပျံ့ ကာ အမှန်သတင်းနှင့်ပြည်သူလူထုအကျိုးပြု အသီးအပွင့်များအဖြစ်မြင်ရပြီး ခွေးလျားသီး နှင့်ခွေးသေးပန်းဘ၀မှ ပိုမိုလှပ တင့်တယ်သော ပန်းများအဖြစ် လူထုအား အဟာရပေးနိုင်သော အသီးများအဖြစ် တိုးတက်ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲသင့်ချိန်တန်ပြီဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရင်းပါးစပ်ကြီးဖြင့် အာနေကြသော
သူများကိုကားလောလောဆယ် ဘေးမဲ့ပေးထားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးရင်း နိဂုန်းချုပ်အပ်ပါ၏။
Posted by Nyein Zay Oo at 6:13 PM 1 comments
Ban-ki Moon is mooning the Burmese people.
The Seoul Times, Online newspaper from South Korea, posted the transcript of CNN's interview with Ban-ki Moon.
The Smiley face,Mr Moon, closed his answer to the last question of the interviewer from CNN; "That's why I have to discuss with Myanmar leadership when I meet them.I'm going to make it happen as soon as possible."
Yes, We understand Mr Moon and his schedule.
As the only and one Secretary-General of United Nations: the most busiest organization on this planet, he has great responsibility to promoteabunch of Korean drama movies,in spite of having alot of customers waiting in line for his very own authentic Korean Kimchi.
Meanwhile incredibly busiest officialdoms from UN are browsing Ebay, facebook , myspace , sushi , Sak's fifth avenue and several other sites online,Mr Moon also has solid reason to delay to meet with vicious and cunning Junta, it never was the official government of Burma,because Mr Moon is busy mooning the Burmese people now.
If he humbly requests Burmese Junta to meet with him, they will readily insert their bananas and Mr Moon is not so ready to take them all in yet.Which is why, international community and the people of Burma must be patience and understand his situation.
Tote kyi (Tar wa tain thar)
Posted by Nyein Zay Oo at 10:08 PM0comments
မတရားတဲ့အမိန့်အာဏာ ဟူ သမျှ တာဝန်အရဖီဆန်ကြ ဟု လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က သူမ၏ အကြမ်းမဖက်ရေး လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားနှင့် စစ်မှန်အေးချမ်းသော ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်
နှလုံး ရည် ၊ဇွဲ ၊ ရိုးသား အနစ်နာခံမှု ၊ခွင့်လွှတ် နားလည် မှုအပေါ်အခြေခံသည့် သိမ်မွေ့ နက်နဲသော တိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းပေါ်မှ ဒေ၀ဒတ်နှင့် မယ်ကုဝဏ်စပ်ကျလာသော စစ် ဗိုလ်ချုပ်များ အား သူမပြောခဲ့သည့်မူအတိုင်း အပြုံးမပျက် ဖြင့် အေးဆေး တည်ငြိမ်စွာ
လူထုမျက်နှာတခုထဲအတွက် ကြံ့ကြံ့ ခိုင်ခိုင် ရင်ဆိုင်လျှက် အိမ်တွင်း အကျယ်ချုပ်ချခါ မတရားသဖြင့် နှောင်ပိတ်မှုအား လူထု အကျိုးစီးပွားအတွက် သည်းခံလျှက် အချိန်တစ်ခုကိုစောင့်ခဲ့၏။
ယခုတော့ နအဖ သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခန္ဓီ ၊ပါရမီကို ရေကုန်မီးကုန် ဖျက်ဆီးရန် သာမန် ယောက်ျားများ ဘယ်သောအခါမှကြံစည်မည့်မဟုတ်သည့် အောက်တန်းကျ ယုတ်ကန်းလှသည့် လုပ်ရပ်ဖြင့် ကြိုးပမ်းလိုက်ပြန်၏။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ထောင်ချောက်ဆင် ဖမ်းသည်ဟု နောက်ဆုံးကြားရ၏။ ထိုသတင်းမကြားခင် နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနများ ပြည်ပရောက် မြန်မာသတင်းဌာနများနှင့် ဗျူး ကြ သော ဦးညဏ်ဝင်းတို့ ၏ စကားများအားနားထောင်မိသောအခါ
ဒီလူကြီး ဟုတ်မှဟုတ်သေးရဲ့လား ဟု ပင်တွေးမိလာ၏။ နအဖ ဘက်က ဘာပုဒ်မ ညာပုဒ်မနှင့်စွဲမည်ဆိုသည့် လေသံမထွက်သေး ၊ထောင်ချောက်တော့ဆင်ပြီးပြီ ဂွင်သွင်း ရန်သာကြံတော့သည့်အခြေအနေတွင် NLD ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆရာသမားက
ခပ်တည်တည်ပင် ပုဒ်မ တပ်၊ နှစ် အပိုင်းအခြား ပင် ကြိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်သေး၏။ သည်တော့မတရားသည့်အမိန့် အာဏာဖြစ်နေလျှက် မတရားသည့်အမိန့် အာဏာမှန်သမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ရန် သတ္တိ မရှိပေ၍လော၊ သို့ မဟုတ် ညံ့လွန်းတုံးလွန်း
၍ပင်လော၊ သို့မဟုတ် ပုလင်းတူဗူးစို့ဖြစ်၍ ပေလော...။ အူတူတူအ တတ နိုင်လွန်းသည် တကယ်မှန်လျှင်လည်း NLD အနေဖြင့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြောင်းသင့်ချိန်တန်ပေပြီ ။
နအဖ၏ မတရားသည့်ဥပဒေ များကို ကိုးကားကာ ပြောဆို မျှော်လင့် တစ်ပေး တွက်ချက်နေကြသည့် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်များ ဆိုတော့လဲ ခက်ဘူးလားလကွယ် ဟုပင် ငြီးရတော့မလို ။
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ် လက်ကြောတင်းအောင်ရှာ၍ တခါဖူးမျှ မစားခဲ့ဖူးသည့် ပြည်ပရောက်ကျွမ်းကျင်သူများဆိုသည့် တချိန်တုန်းကခေါင်းေ ဆာင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသောသူများကလည်း ယခုအခါ ပုဂ္ဂိ္ဂုလ်ရေးတည်ဆောက်မှုနှင့် အနေအစားချောင်ရေး လောက်အတွက်သာ ရပ်တည်ကြတော့၏။
ဗျူးလိုက်ရတဲ့ အင်တာဗျူး ၊ခန့် မှန်းလိုက်ရတဲ့ ခန့် မှန်းချက် ၊ ပေးလိုက်ရတဲ့နှပ်ကြောင်း၊ ကျော်ဝင်း ၊ ဇော်ဦး ၊တင်မောင်သန်း ၊ဇာနည် ၊ဇော်ဝင်းမောင် ၊ အောင်သူငြိမ်း၊ အောင်နိုင်ဦး၊ ၀င်းမင်းနှင့် ထိုသူတို့ ၏ အဆွယ်အပွား များ အဟုတ်ကြီးထင်ကာကြိတ်လေးစားနေကြသော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
အကဲဒမစ်များ ၊အကဲဒမစ်ပေါက်စများ ဟု အသားလွတ်အထင်ရှိဟန်တူသော သူများ တတိယ အုပ်စု ၊ စတ္တုတ္ထ ဥစုပ် များ ၏ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲ လမ်းကြောင်းနောက်လိုက်ရေး ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် မရှိသည့် အပြစ် ကို ရှာကြံပုံချရေး လောက်ကို သာ လုပ်တတ်ကြပြီး တကယ်တန်းတော့
ထိုသူတို့ ၏ ဘ၀တလျှောက်ပြန်ကြည့်လျှင် လူလည် ၊ လူနပ် ၊လူပါး ၊ လူ့ မလိုင် များ သာ ဖြစ်ကြ၏။ လူ့ မလိုင်များ ဘ၀သို့မရောက်ရောက်အောင်မသွားခင်ကလဲ ချီးပုံထိပ်များက လေသလပ်သည့် ပြောင်းဖူးစေ့များ သာ ဖြစ်ကြ၏။ ကြည့်ပါ မ.က.ဒ.တ တွင် ဖြတ်သန်းခဲ့သော ထိုသူများ မ.က.ဒ.တတွင်
ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် သက်တန်းတလျှောက် တိုက်ပွဲမပြောနှင့် ၊ ရှေ့ တန်းစခန်းတွင် ပင် တပါတ်ပြည့်အောင် ပွင့်လင်းကာလမဟုတ်သည့်အချိန်တွင်ပင် ရဲဘော်ရဲဘက်များနှင့် ရေခပ် ထမင်းချက် ကင်းစောင့်လုပ်ခဲ့ဖူးပါသလား ။
ကျော်ဝင်းဆိုသည့်သူကလည်း ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ သေးသေးမွှားမွှားတက္ကသိုလ်လေးတစ်ခုတွင် သွားရောက် ခဲ့စဉ်ကာလက ၊ မာ့က်စ် လီနင် ၀ါဒ ဘာဖြစ်သလေးညာဖြစ်သလေးဖြင့် ကိုရွှေအမေရိကန်ကြီး များ ကမေးစေ့ပွတ်ပြီး 'ကောင်လေး ၊ လိမ်မာလာပြီ'ဟူသောအကြည့်ဖြင့် အကြည့်ခံရယုံ
ထိပ်ပုတ်ခေါင်းပုတ် ဖြင့် ဆက်ဆံခံရယုံလေး အတွက် ထောင်ထဲတွင် အထုခံလိုက်ရသည်ကလည်းရှိဆိုတော့ကာ....တချက်ထဲ အနီမှ တခါထဲ ပန်းရောင်ဖြစ်၍ ပန်းရောင်မှတဆင့်မျောက်ဖင်နီ ပျားတုတ်သလို အရောင်မျိုးစုံပြောင်းလျှက် ၊ နအဖ ၏ ငယ်မွေးခြံပေါက်ဘ၀သို့ဘ၀မကူးပဲ ခုန်ပြောင်းသွား ရင်း ပလွေတို တို့ဘာဂျာ ကျယ်တို့ 
ရေးသည့် စာအုပ်များ ကို အကိုးကားကြီးကိုးကားရင်း ပြည်သူလူထုကို ဆရာကြီးလုပ်စော်ကားပြန်သေး၏။
တကယ်တော့ မြန်မာပြည်၏ အမျိုးသား ပြသနာများသည် စစ်တပ် ကြောင့်လည်းမဟုတ်၊ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ ပြည်သူလူထုကြောင့်လဲမဟုတ် ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကြောင့်လဲမဟုတ်၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ရမည်ဆိုလျှင် အိလေးကွလေး ဖြင့် အလွယ်လမ်း လိုက်ကာ မှိန်း ပြီး ဆရာကြီးလုပ်အကိုးကွယ်ခံချင်
အနေအစားချောင်ချင်သည့် သူများနှင့် တပ်မတော်ကြီးတစ်ရပ်လုံးအား အိမ်ကျွန် လို ခွေးလိုနွားလို အနိုင်ကျင့် ဆက်ဆံနေသော စစ်အာဏာရှင် တစုကြောင့်သာလျှင်ရှင်းမရ လောက်အောင် ခက်ခဲနေရခြင်းဖြစ်၏။
ထို့ ပြင်တ၀ ပရောဂျက် နှင့် ပရိုပိုဇယ်နိုင်ငံရေး ခေတ်ကို ထူထောင်ကာ မိန်းမပေါင်ပေါ်စတော်ဘယ်ရီသီးလျှက် ခွေးလို ဟပ်ချင်သည့် ကောင်များ ကြောင့်လည်းခက်ခဲနေရခြင်းဖြစ်၏။
တကယ်တန်း တပ်မတော်မှ မည်သည့် အရာရှိ မည်သည့် ရဲဘော်နှင့်မျှ ၊ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး တွင် ပုဂ္ဂိ္ဂုလ်ရေး အာဃာတမရှိ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း ပုဂ္ဂိ္ဂုလ် ရေးအာဃာတမရှိ၊ ထို့ ပြင် မည်သည့် လက်နက်ကိုင်အင်အားစုနှင့်မျှ လည်း ပုဂ္ဂိ္ဂုလ် ရေး အာဃာတမရှိ။
တပ်မတော်သည် စစ်အာဏာရှင်၏ ဖျက်ဆီးမှုဖြင့် ဖာသည်ဘ၀သို့ လုံးလုံးရောက်ရ၏။ တော်လှန်ရေးသည် ပရောဂျက် ပရိုပိုဇယ် နိုင်ငံရေး သမားတို့ ကြောင့်ဖာသည်ဘ၀လုံးလုံးရောက်ရ၏။ ပြည်သူလူထု၏ နားမျက်စိတို့ သည်ကား တတိယအုပ်စုလို ကောင်များ၏ နေ့ တဓူ ၀မုဒိန်းကျင့်မှုဖြင့်
ကြိုက်ကုန်းဘ၀သို့ ရောက်ရ၏။ ထိုဖာသည် ဘ၀ ကြိုက်ကုန်းဘ၀ များကို လုံးလုံးရပ်ကာ အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်တူသည့် တမျိုးသားလုံး ပျက်သုန်း သိက္ခာကျ သေဆုံးခြင်းမဖြစ်ခင် ပြောင်းလဲမှုတရပ်အား ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှသာလျှင် ကျနော်တို့ တိုင်းပြည် အား ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်၏။
သို့ မဟုတ်ပါက ကျနော်တို့ အားလုံး ဖာသည်များဘ၀ဖြင့်သာ လျှင် ဖာ ဇာတ်လမ်းမဆုံးပဲ ဖာဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ကြီးကို ဖာနည်းဖာဟန်ဖြင့် တည်ဆောက်ယုံသာရှိတော့သတည်း။
Posted by Nyein Zay Oo at 9:49 PM2comments
Posted by Nyein Zay Oo at 5:07 PM 1 comments
You lose Mr Than Shwe "unfortunately, not the body fat"
Than Shwe , the queer ,the hideous general ,aleftover from Burmese Socialist Programme Party, acting himself asaKing of Burma and personally jealous of Daw Aung San Suu Kyi ,in his inner circle , no one is allowed to utter her name, now makesapall move; that will dig the grave for him and his slave generals who are obsessively in love with dogs.
Wrong move made by Junta
After John William Yettaw, the lunatic from USA, swam across the lake and intruded into Daw Aung San Suu Kyi's residence,heavily guarded compound; the fatuous and Insane generals from Burma thought that "it'sajackpot for them, although they know the standard of their security measure is" , because another loony joined in their parade with or without intent.
Well...! you, sir are just the pathetically unenlarged creatures in military uniforms and nothing more than that.
By doing so, they infuriate people and the international community, even to their good friends , ASEAN. They piss on the heads of ASEAN leaders, who are not actually willing to hold hands together with insane, superstitious, lowlife generals from Burma.
Again ,the move they made isafatal calamity for their survival. Asamatter of fact, there are only two options for them to play around. Indeed,whatever they try to cover their asses, it will not be appreciated by the whole human race.
First option is to continue their dogmatic approach, proceed , sentence Daw Aung San Suu Kyi and two party members who live with , to assist and take care ,their leader Daw Aung San Suu Kyi. Sentence that selfish and deranged American. Later, release that good-for-nothing American.
Instantaneously,try to manipulate international opinion, in reality that will not work well for them.
Second option is, on the trial, deciding that Daw Aung San Suu Kyi is not guilty, but the mother and daughter , party members living with Daw Aung San Suu Kyi, and the American.
Then they will send Daw Aung San Suu Kyi back to her residence alone, to isolate her from human contact, psychological offensive against 63 years old skinny selfless lady,and neglect to release Daw Aung San Suu Kyi 's physician, then they will extend original sentence for at least another 547 days, or release her unconditionally, with hope to lift up the sanction and more participation in their infamous 2010 election based on bogus referendum, it sacrificed over 200,000 human lives.
But ignoring to release all political prisoners and lack of sincerity to create national reconciliation,the people and the international community will not appreciate their sham sanity.
If they choose first option, they have to prepare to kill more people and even have the possibility to fight against their very own Army, or if the second option is their choice ,then they will hold press conference, invite western countries, USA, UN, and members of ASEAN.
In that press conference, they will try to gain understanding and warmly acceptance of both international community and people of Burma.
No matter either option they choose, they certainly lose again. But this time, war crimes, assassination attempt to Daw Aung San Suu Kyi and party members in De Pae Yin, 1988 murders, genocide against ethnic minorities,killing innocent monks and people in 2007,negligence toward Nargis victims, and this incident surely buy them the tickets to international court and uprising in Burma before their 2010 election.
The cunning juggler of Burma, Bulldog Than Shwe, and his devotees are now endangered species, and no one veritably wants to save them anymore, even their beloved Chinese and Russian.
Veraciously, the move made by Junta is pretty messy for ASEAN and friends of Burmese generals.Drastically, it's about time ,for NLD and anyone who wants genuine democracy in Burma, to act swiftly and decisively.
Thus, let's see how western countries, USA and all peace loving leaders of world will practically help end this madness and nightmare of Burma.
Tote Kyi (Tarwa Tain Thar)
Posted by Nyein Zay Oo at 3:06 PM0comments